ဆရာဝင်းမြင့်သိန်း ဈာပနနဲ့ ရက်လည် ဖိတ်ကြားလွှာ ~ Nge Naing
Wednesday, May 18, 2011 Nge Naing4comments
Ko Win Myint Thein(Sayalay)- Creamation program
Place- West Chapel, Rockwood Cemetery, Lidcome, NSW,2141, Australia
1) Program announce announcement
2) Brief biography
3) Monks come in
4) Five Precepts
5) Dama Chanting
6) Robes Dana
7) Sharing merit
Weekly offering to the monks will be done done
at No.4,Henderson Street,Merrylands,NSW,2160
on 21/05/2011 from 10Am-2Pm.
Contact- Ko Sanae- 0403038205 Dr. Myint Cho-0404091143
Naing Aung- 0450498189 Ko Tin Win Aung-0433595535
and other friends whom you know in Sydney.
ဆရာဝင်းမြင့်သိန်းရဲ့ မိသားစုနဲ့ မိတ်ဆွေများအားလုံး ကိုယ်စား Facebook မှာကိုနိုင်အောင် တင်ထားတာကို ပြန်လည်ဖေါ်ပြခြင်း ဖြပါတယ်။
May 19, 2011 at 5:20 AM Reply
ဘလေ.့ပေါ်တင်တဲ. ရက်လည်ဖိတ်စာ ဒီတစ်ခါပဲတွေ.ဖူးတယ်
ပိုစ်.တင်စရာမရှိရင်လည်း မတင်ပဲနေပါအုံးဗျာ.. နာမည်ကြီးဖို.က ပိုစ်.တွေဆက်တိုင်တင်ဖို.မလိုပါဘူး.. ပညာရတဲ.ပိုစ်.တွတင်ဖို.က အဓိကပါ
the track keeper says:
May 20, 2011 at 10:49 PM Reply
မဖတ်ချင်ရင်..လာမဖတ်ဘဲနေလို့ရရဲ့သားနဲ့..အချိန်ကုန်ခံလာလာဖတ်ပြီး..လူလိုဘာမှနားမလည်တတ်သေးဘဲ..မှတ်ချက်တွေလျှောက်ရေးနေရတာ..မငြီးငွေ့သေးဘူးလား..။ ဒါ မဂ္ဂဇင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ သတင်းစာလည်းမဟုတ်ဘူး။ တတ်သိကျွမ်းကျင်တဲ့ စာပေတည်းဖြတ်သူ၊ စာပြင်ဆရာ၊ ပန်းချီပညာရှင်တွေ ရေးသားဖန်တီးထားတဲ့ စာမျက်နှာတွေမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ရေးချင်ရာကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာမျက်နှာတွေ..။ အဲဒီလိုနေရာမှာ လာပြီး ဝေဖန်အပြစ်တင်တာတွေလာရေးနေ၊ ပြောနေကတည်းက မင်း mg ဆိုတဲ့လူ အတွေးအခေါ် ဘယ်လောက်ခေါင်းပါးတယ်ဆိုတာ သံပုံးလာခေါက်ပြနေတာဘဲ။..
ကျွန်မ အလုပ်များနေချိန်မှာ လာပြီး အကြောင်းပြန်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် the track keeper. ဒီလိုပဲ ဒီတယောက်က ကျွန်မဘာပဲလုပ်လုပ် စောင့်ကြည့်ြ့ပီး ကျွန်မကို သိပ်ကိုဂရုစိုက်ပါတယ်။ တာဝန်အရလား ၀ါသနာအရလားတော့မသိဘူး။
June 3, 2011 at 1:12 AM Reply